Nhema Chishanu Svondo Madhiri pa iPhone, iPad uye Apple Tarisa | IPhone nhau
Nerusi Chishanu Svondo Madhiri pa iPhone, iPad uye Apple Tarisa
Amazon yatove nezvipo zvayo zvakagadzirirwa nhasi muvhiki yeChishanu Chishanu uye isu tasarudza dzinonyanya kufadza mumidziyo yeApple uye zvishongedzo. Ndiwo mukana wekutenga yako nyowani iPhone, Apple Watch kana AirPods, kana kuwana yakakwana chishongedzo chawanga uchitsvaga.
4 Zvimwe zvinhu
Iyo yazvino modhi yeAple wachi iri kutengeswa pane yakakosha dhisikaundi kuAmazon. Tora smartwatch yepamusoro kwazvo yenguva iyoyo, ine sensor yemoyo, oxygen sensor, electrocardiogram uye ese mabasa aunogona kufungidzira pamutengo wakaderera iwe waunogona kuwana izvozvi. Iko kune zvakare zvinonakidza madhiri pane iyo Apple Tarisa SE uye apfuura mamodheru.
Apple Kuona Mutsara 6 44mm pa € ​​399
Apple Tarisa SE 44mm pa € ​​315
Apple Tarisa SE 40mm pa € ​​249
Apple Kuona Mutsara 3 42mm pa € ​​209
Apple Kuona Mutsara 3 40mm pa € ​​177
Isu tinogona zvakare kuwana zvinopihwa paApple smartphone. Enda kumberi kweKisimusi uye utore iyo modhi yawanga wakamirira kwenguva yakareba pamutengo wakaderedzwa. Nakidzwa neimwe yekamera dzakanakisisa pamusika uye zvese zvinoitwa neiyi smartphone, ine chitoro chakakosha kwazvo chekushandisa uye vimbiso yekuti data rako rinogara riri rako.
iPhone 12 mini 64GB ye € 784
iPhone 12 mini 128GB ye € 833
iPhone 12 mini 256GB ye € 949
iPhone 11 Pro 512GB ye € 1099
iPhone SE 128GB ye € 486
iPhone SE 256GB ye € 595
Apple mahedhifoni akachinja musika weasina waya mahedhifoni. Iye zvino unogona kuwana anonyanya kudiwa mahedhifoni eBluetooth enguva yacho pamutengo wakakosha. Nakidzwa nemumhanzi wakanakisa nezwi rakanakisa uye nekuzvimiririra kwenguva refu, uye kanganwa nezve tambo nekusingaperi.
AirPods 2nd Gen ye € 134,99
AirPods 2nd Gen ine Wireless Wachaja Kesi ye € 173
AirPods Pro ye € 209,98
Iwe unogona zvakare kuwana zvakakosha kuderedzwa pane zvishongedzo zveako Apple zvishandiso: majaja, mabutiro, tambo ... Pano isu tinosarudza akanakisa ekupa atakawana kuAmazon.
Belkin 10w yekuchaja base ye € 19,99 ç
Wadhi Yekuchaja Dhizaini yeApple uye Apple Tarisa Belkin ye € 94,99
Satechi charger ine 4 USB-C Simba Dhirivhari yemachiteshi inosvika ku90W ye € 62,99
Apple Penzura Yechipiri Chizvarwa che € 2
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » IPhone zvishongedzo » Nerusi Chishanu Svondo Madhiri pa iPhone, iPad uye Apple Tarisa
Dhawunirodha kumashure mukati meiyo iPhone 12